मेरो कोरियाली जिवनका केही क्षणहरु « A Nepali passion for cricket
Young hope - Republica बुधवार, डिसेम्बर 7, 2016LETTERS: Explore the potentials - Himalayan Times शुक्रवार, डिसेम्बर 9, 2016Chaudhary, Pandey co-convenors of ICC advisory committee to resolve Nepal cricket crisis - Himalayan Times मंगलवार, नोभेम्बर 15, 2016Fading under the colours - The Kathmandu Post शनिवार, नोभेम्बर 12, 2016Pandey, Chaudhary named co conveners of ICC Advisory Committee - Republica मंगलवार, नोभेम्बर 15, 2016Pandey, Chaudhary new joint coordinators - The Kathmandu Post बुधवार, नोभेम्बर 16, 2016ICC agrees to form board to regulate Nepali cricket - Republica आइतवार, सेप्टेम्बर 4, 2016ICC World Cup journey not over yet: Nepali cricket team - Kathmandu Post शुक्रवार, अगस्ट 19, 2016Nepali cricket team announced for England tour - E Kantipur सोमवार, जुलाई 4, 2016ACC's resurrection: What's in it for Nepali cricket? - Online Khabar (English) (satire) (blog) बुधवार, अगस्ट 24, 2016
43,009 औं व्यक्ति हुनुहुन्छ
Indo-Nepal T20 cricket series	मेटा
Baroda 458/10 v Uttar Pradesh 481/10 & 117 *Bengal 475/9 v Madhya Pradesh 363/8 *Gujarat 307/10 v Tamil Nadu 397/4 *Mumbai 94/2 & 185/9 * v Punjab 468/10 Delhi 109/4 & 237/10 * v Saurashtra 420/10 & 92/10 Karnataka 345/10 & 39 * v Maharashtra 218/10 & 163/10 Rajasthan 140/10 & 163/9 * v Vidarbha 116/10 Andhra 171/6 & 190/10 v Hyderabad (India) 143/10 & 13/1 *Chhattisgarh 370/10 & 101/1 * v Jammu & Kashmir 242/10 Goa 380/10 & 99/2 * v Himachal Pradesh 528/10 « The ACC Female Tournament Final
मेरो बारेमा »
मेरो कोरियाली जिवनका केही क्षणहरु
Posted by Prabin the सोभित on शनिवार, जुलाई 28, 2007
आज शुक्रवार रहेछ । हेर्दाहेर्दै समय पनि कति छिटो बित्दो रहेछ, ल हेर हिजो मात्र एउटा आइतबार गए जस्तो लाग्थ्यो फेरी अर्को आइतबार आउन लागेछ । खै यसरी नै कति समय बिते बिते । यहाँ कामको व्यस्तताले गर्दा होला समय पनि अचाक्ली छिटो जादों रहेछ ।
हेर कोरिया पसेको पनि पाँच वर्ष भएछ अर्थात थप पाँच वर्ष आयु कम । मानिसको जीवनमा एक पल्ट आउने अमूल्य युवा अवस्थाको पाँच वर्ष यहाँ कोरियामा बिताए पनि यस अवधि बिचमा मेरा जिवनका अनेकन् अविष्मरणिय घटनाहरु घटेका छन् । केही सुखदायक केही दुखदायक, जे भए पनि यसले मलाई भविष्यका लागि पाठ पढाएको छ । मैले आफ्नो देशमा रहदा अनुभव गर्न नपाएको आत्मविश्वास यहाँ आइकन पाएको छु जो म सगर्व भन्नसक्छु । यही आत्मविश्वासको कमीले गर्दा देशमा थालेको आफ्नो व्यवसायमा सफल हुन सकिएन, दुख त सके सम्म गरेकै थिएँ जस्तो लाग्छ त्यसले मात्र पनि पुग्दो रहेनछ । यहाँ आइकन दुख भएपनि काम अनुसारको दाम पाइने हुदाँ सन्तुष्ट नै छु ।
यहाँ आएर केही कमाउन सकेको हुदा घरलाई सहयोग गर्न सकेकोमा थप आत्मसंतुष्टी मिलेको छ र कसैलाई गार्हो सार्हो पर्दा पछि पर्न परेको छैन । यो मेरो सुखद पक्ष भए पनि मैले एक दुर्घटना कारण बिताउनु परेको अस्पतालका ती चालिस दिनहरु मेरा लागि मेरो जीवनकै दुखद क्षण मान्दछु । परदेशमा एक्लै ‌औषधोपचार गर्नु कति गार्हो हुदोरहेछ एकदम नजिकबाट अनुभव गर्न पाएँ । चोटको असैह्य पीडा बिच यो एक्लो जीवन अनि कोरियन अस्पतालको त्यो शैया । त्यस बेला मैले कोरियन पनि त्यति बोल्न जानेको थिइन, जसको कारण आफ्नो पीडा कसैलाई सही रुपमा भन्न नसक्दा कति चोटि त अर्थको अनर्थ पनि लाग्थ्यो । तर दुखमा भगवानले सहारा दिन्छन् भने झै एक कोरियन महिला( आजुम्मा), जो श्रीमान् बिरामी परेर मेरो अघिल्तिरको शैयामा आएकी थिइन्, मेरो सहयोगको लागि भगवान झै प्रकट भइन् । तब मात्र मैले मेरो पीडा भुल्दै जान थालें र यसै चालिस दिनहरुका अवधि बिच मैले उनै आजुम्मा मार्फत कोरियन भाषा पनि सिक्न पाएँ ।
यिनै हुन मेरा अनुभव कोरियाली जीवनका छोटकरीमा ।
अब एक वर्ष अरु यहाँ बस्छु जस्तो लाग्छ हेरौं के हुन्छ ।
इति श्रि शुभम् ।
This entry was posted on शनिवार, जुलाई 28, 2007 at 12:27 बिहान	and is filed under मेरो सम्बन्धमा.
« The ACC Female Tournament Final